Ibhlog yabo banqwenela ukupheka kamnandi
Kuthatha ixesha elingakanani ukupheka ham?
Kuthatha ixesha elingakanani ukupheka i4lb yeham engenamathambo? Beka i-ham kwisitya sokubhaka nge-1/2 indebe yamanzi. Gubungela ngefoyile ye-aluminium. Bhaka kwi-325 ° F malunga nemizuzu engama-20 ukuya kwe-30 ngeponti nganye de kushushu. Khonza i-ham ngoku okanye i-glaze ngolu hlobo lulandelayo: Susa i-foil kwi-ham. Uyipheka njani i4.4 yeponti…
iindidi Enye into eluncedo
Uqinisekisa njani ukuba i-bacon iphekiwe?
Ngaba ibalulekile into yokuba ibhakoni ingaphekwanga ngokwaneleyo? I-Bacon ipheka ngokukhuselekileyo ngokukhawuleza. Xa sele icacile kukhuselekile ukutyiwa. Ibhekoni ekrwada ngokwayo ingumngcipheko ophantsi kakhulu, ukuba iphiliswe ngokufanelekileyo. Nokuba ibingaphekwanga, awunakufane ube sengozini. Ngaba ibhakoni evela evenkileni sele iphekiwe? Ngoko...
Ungazipheka ii-boerewors ezivela emkhenkceni?
Yeyiphi eyona ndlela yokupheka i-boerewors? Sebenzisa icephe leoyile ye-olive kwi-skillet kwaye uvumele i-boerewors yakho ipheke kubushushu obuphantsi. Ubushushu obuphantsi buya kuvumela ii-boerewors zipheke ngokulinganayo ngelixa zimdaka kwicala ngalinye. Malunga nemizuzu eli-10 kwicala ngalinye kufuneka yanele imizuzu engama-20 iyonke. Ndingenza njani …
Umbuzo wakho: Yeyiphi imifuno ephekiweyo esempilweni okanye ekrwada?
Ngaba kungcono ukutya imifuno eluhlaza okanye ephekiweyo? Ukutya imifuno ekrwada kunika umzimba wakho awona manqanaba afanelekileyo efolate kunye neevithamini ezinyibilikayo emanzini ezifana nevithamin C. … Ukanti izondlo kwimifuno ephekiweyo kulula ukwetyisa nokufunxa. Iintsinga ezithambileyo zemifuno ephekiweyo zikhokelela ekukhululweni kweevithamini E ...
Itshintsha njani imifuno xa iphekiwe?
Itshintsha njani imifuno xa iphekiwe? Ukupheka kuyitshintsha njani imifuno? Ukupheka imifuno kuqhekeza iindonga zeeseli zezityalo, kukhulula ngaphezulu kwezondlo ezibotshelelwe kwezo ndonga zeeseli. Imifuno ephekiweyo ibonelela nge-antioxidants eninzi, kuquka i-beta-carotene, i-lutein kunye ne-lycopene, kunokuba iyenza xa ikrwada. Imifuno ephekiweyo ikwanikezela ngeeminerali ezininzi. Ingaba imifuno ilahlekelwa zizondlo zayo...
Ubuzile: Uyipheka njani iSwede esinqunqiweyo kwi microwave?
I-swede ithatha ixesha elingakanani ukupheka kwi-microwave? Beka i-swede yakho yonke kwi-oven microwave. Beka i-dial phezulu kunye ne-microwave imizuzu engama-20. Kuthatha ixesha elingakanani ukupheka i-swede edayiweyo? Beka i-swede kwipani enkulu, enesiciko. Gcwalisa ngamanzi abandayo ngokwaneleyo ukuze uphantse ugqume amaqhekeza. …
Ungayipheka ixesha elingakanani inyama yehagu kwi-cooker ecothayo?
Ungacotha ukupheka inyama yehagu ixesha elide? Ngaba ungayipheka kakhulu inyama yehagu? Kunzima ukugqithisa i-marbled kakuhle kunye ne-fatty shoulder cut cut. Nangona kunjalo, ingaba yi-mushy ngenxa ye-acids kwi-sauce ukuba ukupheka kuqhubeka ixesha elide ngaphaya kwamaxesha okupheka acetyiswayo. Qiniseka ukuba uyibeke esweni inyama yehagu ...
Ungapheka iham yentsimbi kuma-350?
Upheka ixesha elingakanani i-spiral ham kwi-350? Ukutshisa i-oven ukuya kwi-350 degrees F. Kwipani encinci yokutshisa, beka i-ham icala phantsi. Gubungela ngokukhululekileyo nge-foil kwaye ubhake imizuzu engama-45. Upheka ixesha elingakanani i-ham kwi-350? Tshisa i-oven ukuya kwi-350 degrees F. Vula i-ham kwaye uyihlambulule ...
Umbuzo wakho: Ngaba ukubhaka nokupheka kuyafana?
Ziziphi ezinye zezinto ezifanayo phakathi kokupheka nokubhaka? Zombini zifuna ubuchule kunye nolwazi. Bobabini bafuna ukusika, ukunqunyulwa, ukuxutywa kunye nokuxutywa. Kwaye bobabini banokudala izinto ezilungileyo zokutya. Kodwa eyona nkqubo yokupheka kunye nokubhaka ihlala yahluka kakhulu, inqaku elenziwe lacaca ukuba ufunda…
Kutheni ungafanele unxibe ubucwebe xa upheka?
Ungapheka unxibe ubucwebe? Ngokutsho kweSebe Lezempilo Nentlalo-ntle laseIdaho “izacholo zinokufihla iintsholongwane ezibangela izigulo ezibangelwa kukutya zize zenze kube nzima ukuhlamba izandla. …Ngelixa belungisa ukutya, abasebenzi bokutya kufuneka basuse iiwotshi, imisesane, izacholo, nazo zonke ezinye izacholo ezingalweni okanye ezandleni.” Kutheni ungakhe…
Page1 Page2 ... Page888 Okulandelayo →
Heyi! NdinguSamantha. Ihlabathi leCulinary lilizwe elimangalisayo, elikhulu elidibanisayo. Kweli hlabathi, sithatha imela ngeengcinga eziqaqambileyo ezandleni zethu ukupheka abathandekayo. Kwaye ivumba lezitya zomntu ngamnye ngamanye amaxesha linokusihambisa kumaxesha amnandi ebomini bethu. Bonke abo bathanda kwaye bafuna ukupheka, Wamkelekile!
© 2022 Ihlabathi lokupheka